कीबोर्ड - iSearch
सुरु इलेक्ट्रनिक्स कम्प्युटर कीबोर्ड
अगस्ट 22, 2017
1 कम्प्यूटर कीबोर्डले साधारण पल्स ट्रांसमिशन भन्दा बढी प्रस्ताव गर्दछ
2 यदि धेरै ढिलो भयो भने सही किबोर्डको लागि नदेखाउनुहोस्
3 सही सान्त्वना
4 सस्तो सौदाहरू र किबोर्डका लागि प्रविष्टि दरहरू
5 नयाँ किबोर्डहरूको महत्त्वपूर्ण फाइदा
6 कार्यक्रमहरूको रिमोट कंट्रोल
7 कीबोर्डहरूको विशेष मोडेल
8 एकीकृत प्रदर्शनको साथ कीबोर्ड
9 पूर्ण व्यक्तिगत कन्फिगुरेसन
10 केबलहरू बिना, नयाँ किबोर्डको लागि अर्को सुविधा
11 कीप्याडको ergonomic आकार
12 धेरै चीजहरू नयाँ कीबोर्डको खरिदका लागि बोल्छन्
कम्प्यूटर कीबोर्डले साधारण पल्स ट्रांसमिशन भन्दा बढी प्रस्ताव गर्दछ
तपाइँ पीसी प्रयोगकर्ताहरू र प्रयोगकर्ताहरूको रूपमा तपाईं मात्र तपाइँको पीसीको लागि दायाँ कीबोर्डबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। तपाईं वास्तवमा के तपाई चाहनुहुन्छ भनेर जान्नुहुन्छ, किनकि कार्यहरू हराउँदछ र घट्टे कुञ्जी केहि हदसम्म निराशाजनक छन् र यसको आवश्यकता पर्दैन। केवल सही किबोर्ड खोज्नुहोस् जुन तपाईंलाई संयुक्त दुखाइ छैन र यो धेरै महँगो छैन। खरीद गर्दा सही सल्लाहको साथ, तपाईं आफैलाई एक गेमर वा कसैलाई जुन धेरै लेख्न चाहानुहुन्छ, वास्तवमा उत्पादन जुन तपाइँ र तपाईंको आवश्यकताहरु साँच्चै उपयुक्त हुन्छ।
यदि धेरै ढिलो भयो भने सही किबोर्डको लागि नदेखाउनुहोस्
जब तपाईंलाई थाहा छ कि किबोर्डमा धेरै गाह्रो वा असुविधाजनक देखिन्छ तब सम्झौता हुँदैन। पुराना कुञ्जीपाटी दिमागमा नपराएसम्म पर्खनुहोस् वा स्ट्रोकहरू ठीकसँग भेट नभएसम्म यो कष्ट हुन्छ। धेरै निर्माताहरूले प्रस्तावमा वास्तविक सान्त्वना पाउँछन् र थप रूपमा यी नयाँ प्रस्ताव गर्छन् कीबोर्ड अभिनव ergonomics। त्यहाँ सधै सही उत्पादन हो र तपाईले यस रोजगारीका सामानहरू धेरै किबोर्डबाट दायरा रोज्नुपर्छ। कबेलोज ट्रांसमिशन र नरम र अनुहार बटनहरू जुन तपाइँले अगाडि बढ्नुहुन्छ। साथै, केप्याड माथिका हातहरूको मनोवृत्ति, तपाईंलाई धेरै प्रयासहरू सुरक्षित गर्न सक्दछ। यी उत्पादनहरूको पहिलो विशेषता हो जुन निर्माताहरूले तपाईंलाई धेरै पटक प्रस्ताव गर्छन् र यो सुविधाहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्दछ।
किबोर्डको थप प्रकार्य वास्तवमा मानकको हो र यो शैलीको धेरै प्रतिस्थापन उत्पादनहरू यी नयाँ खोजी कार्यहरूको सस्तो प्रस्तावको रूपमा प्रस्ताव गर्दछ। यी विशेषताहरूले तपाईंको कामलाई महत्त्वपूर्ण गतिमा बढाउन सक्छ, विशेष गरी यदि तपाईं आफ्नो पीसीको बारेमा धेरै घण्टा बिताउनुहुन्छ। गरिब र कमर कीबोर्डहरूले पनि स्वास्थ्य क्षतिलाई पनि रोक्न सक्छ, र वास्तवमा राम्रो र आरामदायक किबोर्डले तपाइँको शरीरको धेरै क्षेत्रहरूको सुरक्षा गर्दछ।
सस्तो सौदाहरू र किबोर्डका लागि प्रविष्टि दरहरू
तपाईंको पीसी को लागि नयाँ र ergonomic कीबोर्ड को भाग्य को लागत छैन। यो तपाईंले सम्झनु भएको पहिलो सन्देश हो। तपाईंले सानो पैसाको लागि धेरै शक्तिशाली र सहज पीसी किबोर्ड पाउनुभयो, जुन तपाईंलाई सतावट र प्रत्येक स्ट्रोकलाई नयाँ अनुभव बनाउनेछ। धेरै उच्च माग प्रस्तावहरूसँग भेट्न सकिन्छ र मूल्यहरू सयौं द्वारा बोलाउन सकिन्छ। यो एक तार्किक प्रतिनिधित्व हो, किनभने पहिले नै भनिएको छ, निर्माताले यी कीबोर्डको राम्रो उत्पादनको एक धेरै विस्तृत दायरा प्रदान गर्दछ। त्यसैले तपाईलाई वास्तवमा नयाँ उत्पादनको साथ तपाईले प्राप्त गर्न चाहानु भएको कुरालाई विचार गर्नुहोस्। कुनै पनि अवस्थामा, संभावनाहरू राम्रो छन् कि तपाइँ अन्ततः तपाइँका आवश्यकताहरूको लागि उत्तम कुञ्जीपाटी पत्ता लगाउनुहुनेछ। आउनुहोस् हामी धेरै अनुकूल उदाहरण देखाउन सक्छौं; चेरी जेके- 0800DE-2 केडीई 1000 कालो लेआउटमा जर्मनी; Amazon मा उपलब्ध छ पहिले देखि नै 13 यूरो को लागि। अर्को उदाहरण Logitech वायरलेस टच कीबोर्ड K400 प्लस लेआउट जर्मनी QWERTZ रङ कालोमा रहेको छ र तपाईले यो आरामदायक उत्पादनको लागि 37 यूरो वरिपरि तिर्नुपर्छ। त्यसोभए तपाईंले मूल्य देखाउनुहुन्छ, धेरै सानो र धीरे बढ्छ। कुञ्जीपाटीका लागि प्रवेश दरहरू राम्रो प्रख्यात निर्माताहरूको राम्रो उत्पादनका लागि राम्रो छन् र यी कीबोर्डहरू वास्तवमा लगानीको योग्य हुन्छन्।
नयाँ किबोर्डहरूको महत्त्वपूर्ण फाइदा
त्यहाँ सधैं पुरानो किबोर्ड प्रतिस्थापन लागि राम्रो कारणहरू छन्। सायद आफ्नो पुरानो किबोर्ड आभूषण को केवल एक प्रकारको को समारोह कुञ्जीहरू, किनभने धेरै सञ्चालन प्रणाली यी बटन नियुक्त मात्र सानो कार्यहरु। निरन्तर प्रयोग गर्न मद्दत प्रमुख र कहिले मात्र सिद्धान्त तपाईं सहायक प्रतिस्थापन गर्न नयाँ किबोर्ड हेर्दै छन् विजयी गर्नुपर्छ त व्यस्त छ जो एउटा उदाहरण भने आफ्नो पीसी मा हडताल मा पुरानो किबोर्ड। एउटा महत्त्वपूर्ण नयाँ किबोर्डहरूको साथमा फाइदा त्यस्ता सुविधाहरू जुन तपाइँसँग उपलब्ध छन् र यदि तपाइँ खरिद गर्न निर्णय गर्नुहुन्छ भने, तपाइँलाई नयाँ विचार गर्नुपर्दछ यो कीबोर्डमा चालक स्थापना गर्नुहोस्। यो सरल चाल संग, तपाईं वास्तव मा प्रस्तावित सबै महत्वपूर्ण विशेषताहरु को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, र यसले तपाईंलाई सहि आराम दिन्छ। जब तपाइँ आफ्नो पुरानो किबोर्डलाई नयाँसँग बदल्न निर्णय गर्नुहुन्छ यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदा हो। त्यसपछि तपाइँ कुञ्जीपाटीहरूबाट कार्यक्रमहरू सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंको ई-मेल सिधै सम्पादन गर्नुहोस्, र वेबसाईटको माध्यमबाट सीधा क्यामेरा नियन्त्रण गर्नुहोस्। यसको अतिरिक्त, तपाइँ प्रत्येक नयाँ किबोर्ड व्यक्तिगत रूपमा कन्फिगर गर्न सक्नुहुनेछ र उपयुक्त सेटिङहरू बनाउनुहोस् ताकि तपाईं वास्तवमा यसको साथ मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ किप्याड प्राप्त। तिनीहरू आफैलाई प्रयोग गर्ने अपरेटिङ सिस्टमका कार्यहरूको अधिक स्वतन्त्र बनाउँछ र यहाँ तपाइँले नयाँ कुञ्जीपाटीका धेरै अतिरिक्त सुविधाहरूको महत्त्वपूर्ण लाभ प्राप्त गर्दछन्। म्याक्रो बारेमा तपाईले कहिल्यै सुन्नुभएको छ, त्यो पूर्ण आदेश श्रृंखलाहरू छन्, जुन तपाइँ एक नयाँ कुञ्जीपाटी र उनीहरूको थप प्रकार्यहरूसँग नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, केवल एक क्लिकका साथ। उदाहरणको लागि, तपाई सधैँ सुधार गर्न सिधै किबोर्ड र कमान श्रृंखला प्रयोग गरी सक्नुहुनेछ। तपाईले कुनै पनि थप कार्य चरणहरू चलाउन आवश्यक छैन किनकि म्याक्रोले स्वचालित रूपमा काम गर्छ। नयाँ किबोर्डले विशेष कुञ्जी संयोजनको परिभाषित सुविधाको सुविधा पनि प्रदान गर्दछ, त्यसैले तपाइँ कामको आदेश अनुक्रम पनि यस्तो कार्यपट्टीमा निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईंको पुरानो मानक कुञ्जीपाटी बनाउन सक्दैन र यी महत्त्वपूर्ण फायदाहरू छन् यदि तपाई साँच्चै कुशलतापूर्वक काम गर्न चाहनुहुन्छ भने। साथै पीसी र नयाँ किबोर्ड प्रयोग गरी धेरै व्यक्तिहरूको सम्भावना निर्माताहरू द्वारा प्रदान गरिएको छ। यहाँ, यी नयाँ कुञ्जीहरूमा व्यक्तिगत प्रयोगकर्ता प्रोफाईलहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ, जसले सबैलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछ। विशेष कुञ्जीहरू अनलाईन रूपमा नयाँ किबोर्डमा कन्फिगर गर्न सकिन्छ।
कार्यक्रमहरूको रिमोट कंट्रोल
यदि तपाइँ दूरस्थ रूपमा आफ्नो प्रोग्राम प्रयोग गर्ने बारे सोच्नुभएको छैन भने, नयाँ किबोर्डहरूले तपाईंलाई यो नयाँ खोज पत्ता लगाउन अनुमति दिनेछ। उदाहरणका लागि, तपाईं दूर गर्न संगीत बजाउनुहोस्, भोल्युम समायोजन गर्नुहोस्, र चलचित्र थियेटर जस्ता भिडियोहरू रोक्नुहोस् वा सुरु गर्नुहोस्। तपाईले गर्नु पर्छ सबै एक नयाँ मल्टीमीडिया कीबोर्ड को खरीद छ। यी मोडेलहरू तपाईंको लागि विशेष गरी उपयुक्त छन् भने तपाईले प्रायः तपाइँको पीसी मार्फत यी कार्यहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। यसले तपाईंलाई ह्यान्डललाई माउसमा बचत गर्दछ।
कीबोर्डहरूको विशेष मोडेल
विशेष कार्यालय कीबोर्ड तपाईंको पीसीको लागि नयाँ किबोर्डको यो शैलीसँग सम्बन्धित छ। जब तपाईं यी अतिरिक्त सुविधाहरूसँग कीबोर्डहरूमा चासो राख्नुहुन्छ, तपाईंको कार्यालय कार्यहरू जस्तै व्यवसायिक अक्षरहरू, गणनाहरू, वा लेबलहरूको सीरियल मुद्रण गर्नका लागि उत्तम तरिकालाई कुञ्जीपाटीमा गर्न सकिन्छ। विशेष इन्टरनेट किबोर्डहरू केहि विक्रेन्डहरू बाट उपलब्ध छन् जुन तपाइँलाई छिटो ब्राउज गर्न र चाँडो इन्टरनेट खोज्न अनुमति दिन्छ। तपाईं आफ्नो ई-मेल सञ्चारलाई क्रांति दिन सक्नुहुन्छ र अधिक कुशलतापूर्वक सर्फ गर्न सक्नुहुनेछ।
एकीकृत प्रदर्शनको साथ कीबोर्ड
एक एकीकृत प्रदर्शनले तपाईंलाई समय र मितिको ट्रयाक राख्न मद्दत गर्न सक्छ। संगीत पटरिहरु को प्लेब्याक पनि प्रदर्शन मार्फत निगरानी गर्न सकिन्छ र तपाईं पनि प्रत्यक्ष रूपमा ई-मेल, एसएमएस वा यो प्रदर्शनमा अन्य कार्यहरू प्रदर्शन गर्न सक्नुहुनेछ। यसको अतिरिक्त, यी किबोर्डहरूले पनि स्मार्टफोन र आउने सन्देशहरूको लिङ्क प्रदान गर्दछ। यी किबोर्डहरूले पनि ब्लुटुथ वा वाइफाइसँग इन्टरफेसहरू छन्।
पूर्ण व्यक्तिगत कन्फिगुरेसन
जब तपाइँ नयाँ किबोर्ड किन्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई अनुकूलित गर्न अनुमति दिन्छ यो एक आशिष् हुन सक्छ। केवल ग्यामरहरू तपाइँका आवश्यकताहरूको सबै सेटिङहरू पुन: परिभाषित गर्न तयार छन्। यी कुञ्जीपाटीहरूसँग तपाईले साँच्चिकै तपाइँको व्यक्तिगत आवश्यकताहरुका सबै कुञ्जीहरूसँग मेल खाने सम्भव छ। चालक लेआउटमा तपाइँ आफ्नो प्रोग्रामिंग सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले नयाँ किबोर्डको नयाँ डिजाइनमा प्रयोग गर्नुहुनेछ। यसको मतलब तपाईंको लागि निरपेक्ष सान्त्वना, किनभने तपाईंले एक अद्वितीय उत्पादन प्राप्त गर्नुभएको छ। एक कुरा निश्चित छ, एक पटक तपाईंले यो चरण लिनु भएको बेला, तपाईले मानक किबोर्डमा काम गर्न गाह्रो पाउनुहुनेछ। तर तपाइँ यो चरण लिनु भएकोमा खुसी हुनुहुनेछ, किनभने तपाईं यो दक्षतालाई सम्झन चाहनुहुन्न, खास गरी जब तपाइँ पीसी संग खेल्दै हुनुहुन्छ।
केबलहरू बिना, नयाँ किबोर्डको लागि अर्को सुविधा
आज, कुनै पनि केबल केबल को बारे मा चर्चा गर्न जाँदैछ, र नयाँ कुञ्जी किन्नु यो यो पनि सत्य हो। यस प्रकारको ताररहित संचालित उत्पादहरू आज प्रत्यक्ष र विश्वसनीय रूपमा छन्, जस्तै उदाहरणका लागि मोडलहरू जुन तपाइँले तपाइँको USB मा USB जडान मार्फत डक गर्नुहुन्छ। तपाईं स्वतन्त्र रूपमा चयन गरिएको स्थान तपाइँको पीसीको लागि चयन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईं आफ्नो कीबोर्ड र कामको साथ निःशुल्क हुनुहुन्छ। अर्कोतर्फ, तपाईं सँग यो स्थान पुन: स्थान परिवर्तन गर्न एक नयाँ स्वतन्त्रता छ र एक नयाँ आरामदायक ठाउँ खोज्नुहोस्। किबोर्डमा उजुरी र अवरोधक केबलहरू हुनु पर्दैन, र यो सुविधाले तपाइँलाई कुनै पनि परिस्थितिमा अनुमति दिनुपर्छ।
कीप्याडको ergonomic आकार
नयाँ कीबोर्ड को बाङ्गो प्रकारका बस फेशन लात वा डिजाइन अध्ययन छैनन्, तर यहाँ तपाईं आफ्नो जोइन्टहरूमा राहत र आफ्नो समय एक किबोर्ड मा लामो समय को लागि दुखाइ बिना खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यी ढाँचाहरूको व्यवस्था निर्माताहरू द्वारा तपाईका भविष्यका ग्राहकहरूको लागि परीक्षणहरूसँग मेल खान्छ। तपाइँ यहाँ नयाँ किबोर्ड यहाँबाट लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। यी किबोर्डहरूको प्रस्ताव एकदम सही छ र यो विस्तृत प्याड र यी उत्पादनका सुपर पतली बोडिसिट्सहरूमा लागू हुन्छ।
धेरै चीजहरू नयाँ कीबोर्डको खरिदका लागि बोल्छन्
यदि तपाइँ अहिले अब एक किबोर्ड किबोर्ड प्रयोग गर्ने फायदाहरू जान्नुहुन्छ भने, यो नयाँ र अधिक सहज कुञ्जीपाटी खोजी गर्न सुरु गर्ने समय हो। यी राम्रो र जरूरी महंगा उत्पादहरूको विचारबाट निष्कर्ष अनुशंसायोग्य छ। तपाईं केवल आफ्नो काम थप कुशल बनाउन, थप गर्न र धेरै अतिरिक्त कार्यहरु आफ्नो पीसी मा नयाँ किबोर्ड संग अब सम्म तपाईं लुकेका बाँकी छ कि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। केवल नयाँ किबोर्डको प्रस्तावबाट तपाईंको लागि सही उत्पादन सही खोज्नुहोस् र तपाइँ यी किबोर्डमा नयाँ अनुभव गर्ने।
प्रस्तावBestseller no। 1
Logitech K280e कीबोर्ड (वायर्ड, व्यवसाय किबोर्ड, QWERTZ, जर्मन लेआउट) कालो सूचक
ठूलो, सहज हथेली आराम - सबै आराम गर्ने कर्मचारी उत्पादकलाई सान्त्वना त्याग्नु बिना
स्प्ल्याश-सबूत - कफी कतै फेरि भरिन्छ जबसम्म, तपाईंको लगानीको बाँकी छ
आधुनिक, सुन्दर प्रोफाइल - कर्मचारीहरू परिष्कृत डिजाइनको आनन्द उठाउँछन् र वास्तवमा उनीहरूको आधुनिक कार्यस्थलमा सहज महसूस गर्छन्
डिलीवरीमा समावेश: लगईटच K280e कीबोर्ड (वायर्ड, बिजनेस कीबोर्ड, QWERTZ, जर्मन लेआउट
Logitech G213 Prodigy गेमि keyboard कीबोर्ड, RGB प्रकाश, प्रोग्राम G-key, बहु-मीडिया नियन्त्रणहरू, एकीकृत पाम आराम, छप्पर प्रूफ, जर्मन QWERTZ लेआउट प्रदर्शन
आरजीबी प्रकाश क्षेत्रको साथ गेमि Key कीबोर्ड: यो लगिटेक किबोर्डले 16,8 मिलियन र colors्गीन रंगहरूको दायराबाट रंग छनौटको साथ पाँच छुट्टै प्रकाश क्षेत्रहरू प्रदान गर्दछ।
केस: स्लिम केसको साथ स्ट्यान्डर्ड साइज गेमि keyboard किबोर्ड, फोहोरबाट बचाउछ, crumbs र splashes, सफा गर्न सजिलो - गेमि mouse माउस को लागी आदर्श संयोजन।
म्याक डोम बटनहरू: मेकानिकल किबोर्डसँग तुलनात्मक प्रदर्शन प्रदान गर्दछ, राम्रो प्रदर्शनको साथ राम्रो स्पर्श व्यवहारको संयोजन, र गेमरहरूको खेल शैलीमा अनुकूलित
एन्टी-घोस्टिंग गेमि Mat म्याट्रिक्स: एकै साथ धेरै गेमि keys कुञ्जीहरू थिच्दा कन्ट्रोल राख्न इष्टतम खेल प्रदर्शन
विशेष मल्टिमेडिया नियन्त्रणहरू: खेलहरू रोक्न बिना पृष्ठभूमि संगीत नियन्त्रण गर्नुहोस्, साथ ही प्ले, पज र मौन गीतहरू र भिडियोहरू
Logitech MK270 वायरलेस कीबोर्ड माउस सेट, 2.4 गीगा हर्ज वायरलेस कनेक्शन नैनो यूएसबी रिसीभर मार्फत, लामो ब्याट्री लाइफ, विन्डोज र क्रोमओस पीसी / ल्यापटपहरूको लागि, जर्मन क्वार्ट्ज लेआउट - कालो सूचक
उन्नत वायरलेस 2,4-GHz कनेक्शन: लोगिटेकको वायरलेस टेक्नोलोजीले 10 मिटरको दूरीमा छिटो र भरपर्दो जडान सुनिश्चित गर्दछ।
कम्प्याक्ट कम्प्युटर माउस: पीसी माउस सजिलैसँग ज्याकेट वा नोटबुक झोलामा राखिन्छ र मोबाइल काम सजिलो गर्दछ
लामो अपरेटिंग समय: किबोर्ड (36 महिना) र माउस (12 महिना) को साथ ब्याट्री परिवर्तन बिना Siemonatelang कार्य गर्दछ। अन / अफ स्विचले बिजुली बचत गर्न मद्दत गर्दछ
ताररहित कुञ्जीपाटी र माउस: कुनै केबलहरू नभएको, काम गर्ने वा घरमै गेमिaming हुँदा र चालमा अझ बढी सहज हुन्छ
8 विशेष कुञ्जीहरूको साथ कुञ्जीपाटी: तपाईंसँग मिडिया नियन्त्रणमा सिधा पहुँच छ
Logitech MK330 वायरलेस किबोर्ड र माउस, USB, लामो ब्याट्री जीवन, विन्डोज र क्रोम ओएस संग उपयुक्त - QWERTY जर्मन किबोर्ड लेआउट - कालो सूचक
तपाईं आफ्नो मनपर्ने चलचित्र हेर्न चाहनुहुन्छ, उबाऊ गीत छोड्न वा अमेजनमा खरीदारी गर्न चाहानुहुन्छ? 11 विशेष कुञ्जीहरू र4प्रोग्रामयोग्य एफ-कुञ्जीका साथ तपाईसँग तपाइँको मनपर्ने मिडिया, इन्टरनेट, सुरु / पज, भोल्युम र धेरै बढि प्रत्यक्ष पहुँच छ।
किबोर्डको पातलो र स्टाइलिश डिजाइनमा फ्ल्याट, फुसफुस-चुपचाप कुञ्जीहरू छन्, लगातार आरामदायी टाइप अनुभवलाई सुनिश्चित गर्दै
यस पोर्टेबल माउसको साथ भण्डारण डिब्बेको साथ एक USB रिसीभरको लागि जुन स्थायी रूपमा प्लग रहन सक्दछ, तपाईं जहिले पनि र जताततै जडित हुनुहुन्छ - सम्पूर्ण घरमा, कार्यालयमा वा चालमा।
ब्याट्री बाहिर बाधाहरु बिना माउस मा किबोर्ड लागि 24 महिना र 12 महिना को ब्याट्री जीवन धन्यवाद लामो आउनुहोस्। * अनि मा / बन्द स्विच प्रत्येक उपकरण र तपाईंको हात गर्न ऊर्जा व्यवस्थापन सीधा मा स्थित छ संग। * कीबोर्डको लागि ब्याट्रीको जीवन गणना गणना कार्यालय कार्यालयमा प्रति वर्ष अनुमानित2मिलियन आक्रमणमा आधारित छ। व्यक्तिगत विचलन सम्भव छ। माउसको लागि ब्याट्रिको जीवन प्रयोग र पर्यावरण परिस्थितिमा निर्भर छ
लोगिटेक उन्नत 2,4 GHz वायरलेस टेक्नोलोजीले भरखरको आन्दोलनको स्वतन्त्रताको साथ एक विश्वसनीय कनेक्शन प्रदान गर्दछ - द्रुत डाटा ट्रान्समिशन, वस्तुतः ढिलाइ वा असफलताहरू, र वायरलेस ईन्क्रिप्शन
चेरी केसीएनएनमक्स सिन्डर्ड किबोर्ड USB, कालो, QWERTZ सूचक
HAVIT गेमि keyboard किबोर्ड र माउस सेट, LED backlight QWERTZ (DE लेआउट),7बटन गेमिंग माउस7LEDs प्रकाशको रूपमा (800 / 1200 / 2400 / 3200 DPI समायोज्य) (कालो) प्रदर्शन
न केवल दैनिक प्रयोगको लागि, तर राम्रो गेमिंग अनुभवको लागि। विन्डोज 2000 / 2003 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / म्याक ओएस आदि संग उपयुक्त।
19 द्वन्द्व कुञ्जीहरू, 12 मल्टिमेडिया कुञ्जीहरू, विनिमेय "WASD" कुञ्जीहरू र WIN कुञ्जीहरू गेमि forका लागि लक गर्न सकिन्छ।
3 ब्याकलाईट मोड: यो गेमि keyboard कीबोर्डले3मोडहरू प्रस्तुत गर्दछ: इन्द्रेणी रंग / पल्सेट (ब्रीथ) / शट डाउन। टगल गर्न, केवल Fn + "LED" बटन थिच्नुहोस्।
7 गेमि mouse माउस बटनहरू:7र in्गमा ट्रेन्डी, टर्न-अफ, एलईडी प्रकाश जुन प्रयोगको बखत लगातार परिवर्तन हुन्छ: रातो, निलो, बैजनी, पहेलो, स्यान, गुलाबी, हरियो।
गेमि M माउस कार्यहरू: 800 / 1200 / 2400 / 3200 DPI समायोज्य ब्याकलाईट / फारवर्ड / DPI चयन लाइटहरू; फ्ल्यापि display प्रदर्शन जब DPI स्विच गर्दै: 800DPI रातो; 1200DPI- हरियो; 2400DPI निलो; 3200DPI बैजनी।
Logitech MK540 उन्नत वायरलेस किबोर्ड माउस सेट, युनिफाइंग USB रिसीभर मार्फत 2.4 GHz वायरलेस जडान, ब्याट्री जीवनको3वर्ष, विन्डोज र ChromeOS पीसी / ल्यापटपहरूको लागि, जर्मन QWERTZ लेआउट प्रदर्शन
इष्टतम: लगिटेक वायरलेस किबोर्डमा आराम र सही ढly्गले ट्याप गर्नुहोस् सुधार गरिएको शुद्धता र कम जोगिंग शोरका लागि अनुकूलित, चाहे अफिसमा वा गेमि inमा।
बहुमुखी: दायाँ र बायाँ-हात फार्म र नरम रबर पकड सतहहरूको लागि उपयुक्त, ताररहित Logitech माउस पाम मा आरामले नेस्लेस
विश्वसनीय र टिकाऊ: किबोर्डलाई 36 मा महिनाको लागि नयाँ ब्याट्रीहरू आवश्यक पर्दैन। पीसी माउससँग 18 महिनाको लागि पर्याप्त शक्ति छ
सुविधाजनक विशेष कुञ्जीहरू: तपाइँको मिडिया, क्यालकुलेटर र ब्याट्री गेज कुनै पनि समय पहुँच गर्नुहोस्, र प्रकार कुञ्जीहरू परिभाषित गर्नुहोस् जस्तो तपाईंलाई मनपर्दछ।
वायरलेस प्लग र प्ले: पीसी माउस र किबोर्ड सानो यूएसबी रिसीभरलाई लोगिटेक एकीकरण टेक्नोलोजीसँग जडान गर्नुहोस् र तपाईं जान तयार हुनुहुन्छ।
FENIFOX किबोर्ड माउस वायरलेस, डुअल प्रणाली स्विचिंग QWERTZ 2.4G एर्गोनोमिक्स 2400 DPI विन्डोज म्याको iMac व्हाइट र सिल्वर सूचकको लागि whispering कुञ्जी संग।
दुई प्रणालीहरू बीच स्विचिंग: दुई प्रणाली बीच स्विच मात्र Fn + Q, Fn + W.More आराम थिच्नुहोस् यदि तपाईंसँग फरक प्रणाली भएका उपकरणहरू छन् भने।
डबल एर्गोनोमिक्स: आरामदायी प्रयोगको लागि टिल्टिल कोण डिजाइन। तपाईंको हातले केही समयको लागि प्रयोग गरिसकेपछि थकित महसुस गर्दैन।
व्हिस्पर-शान्त कुञ्जी र कुञ्जीहरू: Scissor कुञ्जी स्विच ले निर्मिलो टाइप र संवेदनशील प्रतिक्रिया, सब भन्दा कम-भोल्युम कुञ्जीहरू, र सफ्ट-क्लिक सुनिश्चित गर्दछ।
ट्रेंडी डिजाइन: Fn लक द्वारा मल्टिमेडिया सर्किट डिजाइन, नवीनतम 12 प्रकार्य शर्टकट, पूर्ण आकार लेआउट फेशन मिलान, अधिक आरामदायक कार्यालय मनोरंजन।
उत्कृष्ट अनुकूलता: विन्डोज, XP, म्याक, म्याकबुक Vista, लिनक्स र USB उपकरणहरूको लागि धेरै उपकरणहरूको लागि कुञ्जीपाटी र माउसको संयोजन। र म्याक र इमेक पूर्णको साथ कुञ्जीपाटी फंक्शन कुञ्जीहरू।
२.2.4 जी वायरलेस माउस सेट, कम्प्युटर / डेस्कटप / पीसी / ल्यापटप / सतह / स्मार्ट टिभी र विन्डोज १०/10/8 / Vista / XP (२.7GHz, USB) प्रदर्शनका लागि इक्लिभर एल्युमिनियम वायरलेस स्लिम किबोर्ड QWERTZ लेआउट (जर्मन)
स्लिम र परिष्कृत: भव्य एल्युमिनियम र उच्च-गुणवत्ता एबीएस कुनै पनि ल्यापटपको साथ राम्रो देखिनेछ! यो सुव्यवस्थित किबोर्ड पातलो, हल्का वजन र अल्ट्रा पोर्टेबल हो। यसलाई तपाईंको खल्तीमा राख्नुहोस् ताकि तपाईं कुनै पनि समय, कहिँ पनि काम गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं 99 पूर्ण कार्यात्मक कुञ्जीहरूको आनन्द लिनुहुनेछ, सहज टाइपको लागि परम्परागत नम्बर कुञ्जीहरू सहित।
एर्गोनोमिक डिजाइन: अप्रिय टाइपलाई बिदाइ दिनुहोस्! थप ठूला बटनहरूले सजीलो पहुँच प्रदान गर्दछ र म्याट फिनिश टचमा नरम हुन्छ। अझ राम्रो, हाम्रो अद्वितीय भित्री स्काइसर डिजाइनले हिसपर-शान्त कुञ्जीहरूको लागि कष्टकर रटलिंगलाई हटाउँछ।
शक्तिशाली ताररहित जडान: असहज केबुलहरूको साथ आफैंलाई भार नबनाउनुहोस्। अत्याधुनिक 2,4 GHz टेक्नोलोजीको साथ वायरलेस स्थिरतामा अन्तिम प्राप्त गर्नुहोस्। तपाइँ आफ्नो उपकरणमा चाँडै किबोर्ड र माउस जडान गर्न सक्नुहुन्छ - कुनै पेयरि required आवश्यक छैन! 10 मीटरको उदार दायराको साथ, तपाईं आफ्नो किबोर्ड कोठाको कुनै पनि ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
लामो ब्याट्री जीवन: शक्तिशाली 280 mAh ब्याट्री एक पूर्ण चार्ज पछि प्रयोग को अविश्वसनीय 90 घण्टा प्रदान गर्दछ। कुल चार्जिंग समय2घण्टा हो - तपाईं कम समय पर्खनुभयो र अधिक समय खर्च गर्नुहुनेछ।
3 समायोज्य DPI स्तरहरू: हाम्रो3समायोज्य DPI स्तरहरू (1000-1200-1600) को साथ तपाईंको इच्छित संवेदनशीलता चयन गर्नुहोस्! रिसीभरको उन्नत 2,4 GHz टेक्नोलोजी फ्रेम र फ्रेम ड्रप स्किपिंग बेवास्ता गर्दा छिटो र सही डाटा ट्रान्सफर गर्दछ।
Ri RK900 गेमि keyboard कीबोर्ड USB, color र ill प्रबुद्ध किबोर्ड, १ keys कुञ्जी anti-ghosting, वायर्ड किबोर्ड गेमिंग र अफिसका लागि आदर्श (जर्मन लेआउट, कालो) प्रदर्शन
【मूल्य-प्रदर्शन उन्मुख】 गैर-यांत्रिक Ri RK900 सबै खेल एक खेल शुरुआती आवश्यकता प्रदान गर्दछ। कम्प्याक्ट र एर्गोनोमिक डिजाइन १० key कुञ्जी किबोर्ड गेमि and र उत्पादक कार्यको लागि।
TI एन्टी भूस्टिंग anti एन्टी-घोस्टिंग प्रणालीले छेउछाउको कुञ्जीहरू मिलाउँदा समस्याहरू रोक्दछ। एर्गोनोमिक्स आर्क कीक्याप, चिल्लो रेखा, खेलउँदा वा टाइपि when गर्दा तपाईंलाई सुखद अनुभूति हुन्छ।
Farben colors र back्ग ब्याकलिट किबोर्ड एएल जो रातमा खेल्न मन पराउँछन् वा शैली को रूप मा, RI RK7 किबोर्ड एक सनसनीखेठ एलईडी RGB बैकलाईट छ। तपाईंको आवश्यकता वा व्यक्तिगत इच्छा अनुसार प्रकाश तीव्रता छनौट गर्नुहोस् वा यसलाई पूर्ण रूपमा स्विच गर्नुहोस्।
Able लागू उपकरण Windows विन्डोज 8, विन्डोज 7, विन्डोज भिस्टा, विन्डोज एक्सपी, पीसी ल्यापटप प्याड, गुगल एन्ड्रोइड टिभी बक्स, एचटीपीसी, आईपीटीवी, स्मार्ट टिभी, म्याक, आईओएस र सबै रास्पबेरी संस्करण संस्करण समर्थन गर्दछ।
【मल्टी-कुञ्जी】 Fn + (F1 ~ F12): १२ मल्टिमेडिया कुञ्जीहरू। री RK12 किबोर्ड अन्य लग्जरी मोडेलहरु संग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। यसले एक ठोस र टिकाऊ संरचना प्रदान गर्दछ जुन टिकाऊ हो। सस्तो मूल्यमा उच्च प्रदर्शन सामग्री खोजिरहेका खेलाडीहरू खुशी हुनेछन्।